Diraa jijjiirama diraa keessaa, gara mirgaatti hiriirsisuuf;yookiin akaakuu jijjiiramtoota
Text: Jijjiiramaa Diraa kamiyyuu
Barruu: Diraa kan ati jijjirama diraa keessatti gara mirgaatti hiriirsisuu barbaaddu dha.
Jijjiiramaa1: Jijjiiramaa hiika fayyadamaa kanneen jijjiiramtoota galagalchamaniif galtee ta'ani dha.
Jijjiiramaa2:Jijjiiramaa hiika fayyadamaa, kanneen gara jijjiiramaa biraatti akka garagalfaman barbaaddu dha.
Yoo diraan jijjiiramaa diraa irra gabaabaa te'e,RSet 'n diraa, jijjiiramtoota diraa keessaa gara mirgaatti hiriirsisa. Arfiiwwan hafan kanneen jijjiiramtoota diraa keessaa kamiyyuu iddoodhaan bakka bu'u. Yoo diraan, jijjiiramaa diraa irra dheeraa ta'e; arfiiwwan dheerinaan jijjiiramtoota caalan yoo hallagamanii, fi arfiiwwan hafan qofti jijjiramtoota diraa keessatti gara mirgaatti hiriirsifamu.
Jijjiiramtoota hiika fayyadamaa akaakuu tokko gara biraatti ramaduuf,Hima RSet tti fayyadamuus ni dandeessa.
Fakkeenyi armaan gadii;Hiriira bitaa fi mirgaa diraa Fooyyessuuf hima RSet fi LSet tti fayyadama.
REM Right-align "SBX" in a 40-character string
REM,urjoowwan iddoodhaan bakka buusa.
REM Left-align "SBX" in a 40-character string